~ ဏီလင်းညို ~: မနေချင်သော ရက်စွဲများ......
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 8:01 AM
Keep Strength bro!.. you'll be recovering soon.. I hope so... (currently I can't type in Burmese and so I just write in English)
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီလိုလေး ဖီးလ်ဖြစ်နေတော့
ဘာတွေဖြစ်နေလဲ.. နေမကောင်းရင် ဂရုစိုက်လေ.. ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေနဲ့.. ပြီးတော့ ဘာမှ အားမငယ်နဲ့.. လူတော်တော်များများဟာလည်း ဒီလိုပါဘဲ.. ဆန္ဒတွေ ငွေကြေးတွေအတွက်.. ကိုယ်ချင်ခင်တဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ခွဲနေကြရတာ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတင်းပြီး နေကြရတာပါဘဲ.. လောကကြီးမှာ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းသူတွေရှိသလို ကောင်းသူတွေလဲ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့... တစ်ယောက်တည်း စိတ်အားငယ်နေတာထက်စာရင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေးနေပါ.. တစ်ခါတစ်လေမှာ စကားတစ်ခွန်းဟာလည်း အားဆေးတစ်ခွက် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်
ဒါ . . .ခမည်း လိုတာလို့ ခေါ်တယ်။
အားတင်းကာ အော်လိုက်စမ်းပါ. . . .“ ငါ ဟဲ့ ယောက်ပြား ” လို့။
ဟိဟိ. . .လစ်မှ. .
နေမကောင်း ပြီး ဝမ်းနဲ တာတွေ ပြန်သတိရနေလား
ကိုယ်နေကောင်းကျန်းမာမှ စာတွေပြန်ဖတ်၊ ပြန်ရေးလည်း ရတာပဲဟာ
(ညီမလေးက အငယ်လုပ်နေပြီး ဆရာလာလုပ်သွားတယ်လို့မထင်နဲ့နော်)
နေမကောင်းဘူးလားအကို ပီနန်ကိုအလည်လာလေ.. ရောဂါတွေအားလုံးစင်သွားအောင်ကုပေးမယ်.. ဟိုဖက် မာလာကာမှာတော့မသိဘူး.. ကျနော် တို့ဖက်မှာတော့ တရုတ်ဆေးတွေ ကောင်းမှကောင်းပဲ.. တစ်ချို့ဆိုပြောတယ်.. ဆေးကိုမြင်လိုက်ရရုံနဲ့ ရောဂါပါ ပြေးရောတဲ့.. :P
နောက်တာပါဗျာ.. အရက်ဝိုင်းက လစာထုပ်ကစတိုင်းရှိတာပဲလား.. မိုက်တယ်ဗျာ.. အကို ခံစားရသလို ကျနော်လည်းတစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ်.. အကိုကတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး.. ကျနော်ကတော့ ထမင်းလုံးဝမစားပဲ လေးရက်ဆက်လောက် အရက်သောက်လိုက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေပြီထင်တာ.. အဲဒီတုန်းကတော်သေးတယ်.. ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါအကိုရေ.. နာမကျန်းဖြစ်ရင်.. ပီနန်ကိုသာလာခဲ့ တရုတ်ဆေးတွေနဲ့ ကုပေးမယ်.. ခိ...ခိ... :)
နေမကောင်းရင် အဲဒီလိုပဲ စိတ်အားငယ်တက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် မိသားစုနဲ့ဝေးနေရင်ပိုဆိုးတာပေါ့။ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းမှုတွေဖျောက်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုကိုတည်ဆောက်လိုက်ပါ ကိုဏီလင်းညို...
ဒါနဲ့ လစာထုတ်ပြီးရင် အရက်ဝိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ နေရာတိုင်း အတူတူထင်တယ်။ကျွန်မတို့ ဆီကလူတွေလည်း လစာထုတ်ပြီးနောက်ရက်ဆိုအလုပ်မဆင်းတာ ပုံမှန်ဖြစ်နေတော့ OTကဒ်မှာ တစ်ခါတည်းကို cuti ရေးထားရတော့တာ။
တောက်ထားပါ၊ အခန်းအောင်းမနေနဲ့၊ ဆင်ခြင်ပြီးနေပါ ပျောက်သွားမှာပါ၊ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်၊ ထီးဆိုင်ရဲ့ ရာသီပြောင်းချိန် လေးနားထောင်ပေါ့။
ဏီဏီ နေမကောင်းဘူးလား။ ဝေဒနာခံစားရရင် အဲဒီလိုပါပဲ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။ ဆေးလည်း မှန်မှန်သောက်ပါ။ ဝေဒနာကို ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။
စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ဆင်ဆာမလွတ်လို့ ခံစားချက်ကနဲနဲဆင်တူလို့ကွန်မန့်ထဲပို့ပေးလိုက်တယ်
ခုတလော နေမကောင်းပြီး အားငယ်စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့ ပေါက်ကရ အတွေးတွေကိုရေးရေးနေကြတာများနေတယ် ကိုယ်အပါအ၀င်ပေါ့...။
ဏီဏီရေ...နေကောင်းအောင်နေနော်.... စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့...။ အမလဲ ဒီလိုပဲ စာရေးရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရောဂါကိုမေ့မေ့သွားတာ...အဲဒါကောင်းတယ် အာရုံပြောင်းသွားတာပေါ့..။
Take good care of yourself, bro.
ခုတလော ဘလော့ဂါတွေ ကျန်းမာရေး မကောင်းကြပါလားး
မိဝေးဖဝေးတဲ့အရပ်မှာ နေရတာဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ
ကိုဏီရေ...ကောမန့်လာပေးရတာ မလွယ်ဘူး။ တော်တော်လေးနေတယ်။ နေကောင်းအောင် ကြိုးစားပါဗျာ။ နားနားနေနေနဲ့ စိတ်ကိုလျှော့ထားပါ။ ကော်မန့််မရေးဖြစ်ပေမယ့် ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်းရောက်ပါတယ်။ ထွေလီကာလီစဉ်းစားမနေနဲ့။
နေကောင်းလာပြီမဟုတ်လား။ လာလည်တာ ပင်ပန်းသွားရင် ကြက်ပေါင်းရည် ၀ယ်တိုက်မယ်လေ။ ကျန်းမာစွာနဲ့ ပို့စ်တွေ တင်နိုင်ပါစေ။
အလုပ်တွေများနေလို့ ခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်..
နားနားနေနေစာရေးပေါ့.. ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုစိုက်ဦး
တစ်ခုခုဆို အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ အားငယ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်.. မရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သတိရနေပါတယ်.. ချက်ခြင်းမရောက်နိုင်တာ ခွင့်လွှတ်။
တစ်နယ်ရပ်ခြားမှာ ဒီလိုဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အားပေးရင်း အားတင်းကြစို့။
အကိုရေ နေကောင်းအောင် နေပါဗျာ ..
စီဘောက်မှာ အလိုက်မသိ လာအော်မိတာ..ခွင့်လွတ်ပါ ကိုဏီးရေ..။
မွန် လည်းမအားလို့ ဘယ်သူ့ဆီကိုမှ မရောက်ဖြစ်ဘူး ကိုဏီးရေ..။
ကိုဏီးနေမကောင်းတာ ခူမှ သိတယ်..။စိတ်မကောင်းလိုက်တာ..။
မူးနေတယ်ဆိုတော့ အားနဲနေလို့လား..သွေးပေါင်ကြတာလား..အိပ်ရေးပျက်လို့လား..။ ခုရော နေကောင်းသွားပြီလား..။ ဆရာဝန်ကို သေသေခြာခြာ မေးပါ အုံးးးကိုဏီးရ..။
နေမကောင်းရင် အားငယ်စိတ်တွေ ဝင်တက်ပါတယ် ကိုဏီး။
ဒါပေမယ့် ရောဂါဆိုတာ ဖြစ်ပြီးရင် ပျောက်သွားမှာပါပဲ ။ အားတင်းထားနော်..ကိုဏီး
လူမမာ လာကြည့်တာ နောက်ကျသွားပြန်ပြီ..ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုဏီရေ..။
ညီမလည်း အရမ်းကို အလုပ်များနေလို့...။
ဒါနဲ့ ကိုဏီ့ကြည့်ရတာ..အာရုံကြော အားနည်းတာလား(လှုပ်လိုက်တိုင်း ခေါင်းမူးတယ်ဆိုတော့)။ ညီမလည်း မကြာခနဖြစ်တတ်လို့..။
ညီမက ဆံပင်ရှည်တော့ ခေါင်းခနခနလျှော်လေ့ရှိတယ်လေ၊အဲဒါ နောက်စိက အရိုးနုအအေးပတ်တယ်ပြောတာပဲ..လှုပ်လိုက်တာနဲ့မူးတာ(အခန်းတခုလုံး ခြာခြာလည်နေတာနော်)။
ကိုဏီ့ဝေဒနာက အဲလိုမှမဟုတ်ရင် အဟာရကြောင့်မူးတာလား..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အညောင်းမထိုင်ပါနဲ့အုံး..ထိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း မျက်နှာကို(ခေါင်းကို ငုံ့မထားရလေအောင်) ရှေ့တည့်တည့်ကြည့်လို့ရအောင် ကွန်ပျူတာကိုမြင့်မြင့်ထား၊သို့မဟုတ် ထိုင်ခုံကိုနှိမ့်ပြီးသုံးနော်..။
မြန်မြန် နေကောင်းအောင်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်..နတ်သမီးတန်ခိုးနဲ့ အမြန်ပျောက်စေသတည်း...(အသက်မဟုတ်ဘူးနော်..ဟီးဟီး)
ငါ့အကို ကိုမစရတာကြာပြီ...(၃၀)ရက်နေ့ကျရင် တင်မယ့်ပို့စ်မှာ ကိုဏီ့နာမည်ပါတယ်..လာဖတ်အုံး..
အိမ်နဲ့ ဝေးနေတော့ ပိုပြီး ပင်ပန်းမှာပေါ့နော်။ နေမကောင်းဖြစ်ရင် အမေ့ကို ပိုပြီး သတိရကြတယ်နော်။